Xallin, Sool: Ciidamada Somaliland ee Sanaadiiqda Doorashada Wada oo Dagaal Khasaare Gaystay ku Qaaday Deegaanka Xallin (dhegayso) – Radio Daljir
Xallin, Sool: Ciidamada Somaliland ee Sanaadiiqda Doorashada Wada oo Dagaal Khasaare Gaystay ku Qaaday Deegaanka Xallin (dhegayso)
Agoosto 12, 2017 7:49 g 0
Dagaal sababay dhaawac 2 ruux oo shacab ah ayaa saaka waxaa uu ku dhexmaray degmada Xallin ciidamada Somaliland iyo dadka deegaanka. Guddoomiyaha degmada Xallin ee gobolka Sool Cabdullaahi Diiriye Garabyare ayaa Idaacadda Daljir u sheegay in xaalku hadda deggan yahay balse ay jiraan dhaawacyo uu gaystay dagaalkii saaka halkaas ka dhacay.
Xukuumadda Puntland ayaan weli ka hadlin eedda dadka deegaanka ee ah in Puntland ay ka seexataya deegaanka Sool iyo Cayn. Wasiirka cusub ee Warfaafinta Puntland, Md. cabdi Xirsi Cali Qarjab, ayaa asna shalay beeniyey in Puntland ay raalli ka tahay in sanaadiiqda doorashada la keeno gobolada Sool iyo Sanaag.
Axmed Sheekeeye ayuu Guddoomiyuhu u waramay.